सेफ्टी अडिटसँग किन डराउँछ नेपाल... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
सेफ्टी अडिटसँग किन डराउँछ नेपाल एयरलाइन्स?
पूर्ण सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायु सेवा निगमले एक वर्षअघि किनेका एयरबसका ए३३० जहाजले लामो दूरीमा उडान गर्न पाएका छैनन्। जापान, कोरिया तथा साउदी अरबमा उडान गर्नेगरी ल्याइएका जहाजले ती गन्तव्यका लागि उडान अनुमति नै पाउन सकेका छैनन्।
जहाज नआउँदासम्म जहाज नभई उडान अनुमति नपाएको तर्क गर्ने निगम अधिकारीहरू पछिल्लो समय सम्बन्धित मुलुकले अनुमति दिन आनाकानी गरिरहेको बताउँदै आएका छन्।
अघिल्लो वर्ष जहाज आएलगत्तै नेपाल एयरलाइन्सका तत्कालीन महाप्रबन्धकले कोरिया तथा जापान उडानका लागि गृहकार्य सुरू भएको र दशैंलगत्तै उडान हुने बताएका थिए।
दशैं सकियो, तिहार सकियो। हिउँद सकिएर अर्को वर्षा शुरु हुँदा निगमका जहाज कोरिया उड्ने च्याप्टर बन्द भइसक्यो।
कोरियाले निगमलाई उडान अनुमति दिन नचाहेर काम रोकिएको भने होइन। सर्वसाधरणलाई कोरियाले अनुमति दिन नचाहेको जस्तो भन्ने प्रभावमात्र पारियो। खास कारण थियो-सेफ्टी अडिट।
कुनै पनि देशको उडान अनुमतिदेखि सम्बन्धित एयरलाइन्सको आन्तरिक सञ्चालन म्यानुअलसम्म विश्वव्यापी हवाइ सुरक्षा मापदण्डअनुसार छन् कि छैनन् भनी गरिने यस्तो अडिटबाट नेपाली पक्ष डराएकाले कोरिया उडानको च्याप्टर बन्द भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीको भनाइ छ।
नेपाल एयरलाइन्सले कोरिया उडान गर्ने भन्दै अनुमतिका लागि आवेदन दिएपछि त्यहाँको नागरिक उड्डयन संस्थाले नेपाल सरकारमार्फत् प्राधिकरण र नेपाल निगमलाई पत्राचार गरेको थियो।
उसले नेपालको उडान अनुमति व्यवस्था, हवाइ सुरक्षाको अवस्था, एयरलाइन्स सञ्चालनको म्यानुअलजस्ता विषयमा विस्तृत अडिट गर्न चाहेको कुरा पत्रमार्फत् प्रष्ट पारेको थियो।
पछि नेपाली पक्षले तत्काल अडिटका लागि नेपाल नआउन पत्र पठायो। नेपाल एयरलाइन्सको सेफ्टी अवस्था नाजुक भएको भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अडिट टोलीलाई रोकेको हो।
कुनै पनि एयरलाइन्सले नयाँ गन्तव्यमा उडान गर्नुपहिले यस्तो अडिट गरिन्छ। नेपाल आउने नयाँ एयरलाइन्सको पनि प्राधिकरणले सम्बन्धित देशको हवाइ सुरक्षा तथा एयरलाइन्सको अडिट गर्छ।
कोरियाले पनि यही गर्न खोजेको थियो। जुनमा नेपाली पक्ष हच्कियो।
कोरियालाई हवाइ सुरक्षामा संसारकै उत्कृष्ट मानिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संस्थाको हवाइ सुरक्षा सूचकमा कोरियाको ९९ प्रतिशत अंक छ। त्यही सूचकमा नेपालको अंक ६७ प्रतिशत छ।
कोरिया प्रयास असफल भएपछि नेपाल एयरलाइन्सको ध्यान जापानतिर गयो। उडान अनुमति पाउन सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि जापानको नागरिक उड्डयन संस्थाले भने नेपाल एयरलाइन्सको पत्र जवाफमै चित्त बुझाएर उडान अनुमति दिएको छ।
तर पछिल्लो समय चीनले सेफ्टी अडिट गर्न चाहेको पत्र पठाएको छ। चीनले नेपाल एयरलाइन्सलाइमात्र पठाएको भने होइन। यसअघि चार्टर्ड उडान अनुमति दिनुअघि हिमालय एयरलाइन्सको पनि अडिट गरेको थियो। जसमा हिमालय पास भएको थियो।
चीनको अडिट टोली नेपाल आउन खोजेपछि बोलाउने कि नबोलाउने भन्नेमा अन्यौल बढेको छ।
सेफ्टी अडिटमा निगमलाई यति डर किन?
निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले आफूहरू अडिटमा नडराएको दाबी गरे।
‘हामी सेफ्टी अडिटका लागि सदैव तयार छौं, विश्वस्तरीय उड्डयन सेफ्टी मेन्टेन गरिरहेकै छौं,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
लामो सयमदेखि युरोपियन युनियनले नेपाली आकाशलाई कालोसूचीमा रोखेको छ। यही कारणले गर्दा कुनै पनि देशका उड्डयन नियामकले नेपाली एयरलाइन्सलाई सहजै अनुमति दिन मान्दैनन्।
युरोपले नेपालको उड्डयन सुरक्षाको अवस्था कमजोर भएको, दुर्घटना दर उच्च रहेको र नियमनसम्बन्धी व्यवस्था कमजोर भएको भन्दै नेपाललाई सुधारका लागि पत्र पठाइसकेको छ।
एकातिर युरोपियन युनियनको कालोसूची, अर्कोतिर अडिट गर्न डराउने नेपाल एयरलाइन्सको अवस्थाले वाइड बडी लामो दुरीमा उड्नै कठिन हुने अवस्था आएको छ।
लामो दूरीमा उड्न नपाएकाले एयरलाइन्सले ऋणको किस्तासमेत तिर्न नसक्ने भन्दै सरकारसँग गुहार मागिसकेको छ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, असार २९, २०७६, ०४:५८:००
नेपालमा ९५ प्रतिशत घरधुरी विद्युतको पहुँचमा– विश्व बैंक
धेरै युवा विदेश पठाउने मन्त्री सफल होइन – मन्त्री यादव
मारूती सिमेन्ट विरूद्ध विभागमा उजुरी
चीनको तेस्रो सहरमा हिमालय एयरलाइन्सको उडान सुरु
आईडिपी आईएलटीएसबाट अल्फाबिटा सम्मानित
अन्तर्राष्ट्रिय एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरको क्षेत्रीय बैठक काठमाडौंमा सुरु